Fantaro ny vondrona Galaxies eo an-toerana
Tongasoa ato amin'ny vondrona Galaktika: ny vondrona misy ny galaxie
Miaina ao anatin'ny vahindanitra mahery vaika antsoina hoe Milky Way izahay. Azonao atao ny mijery izany rehefa miseho avy ao anaty ao anaty alina maizina. Tahaka ny hazavan'ny hazavana mihazakazaka eny amin'ny lanitra. Avy amin'ny toerana lavitra indrindra, sarotra ny milaza fa tena ao anatin'ny vahindanitra isika, ary io fahagagana io dia nahagaga ny astronoma hatramin'ny taonjato faha-20. Nandritra ny taona 1920, dia niresaka sy niady hevitra momba ny "rivodoza", ary misy mpahay siansa milaza fa izy ireo dia ampahany amin'ny vahindanitra misy antsika.
Ny hafa dia nanamafy fa vahindanitra samihafa ivelan'ny Lalana Milky. Rehefa hitan'i Edwin Hubble ny kintana iray mitovitovy amin'ny "havoana nivezivezy" ary norefesiny ny elanelany, dia hitany fa tsy ny ampahany amin'ny vahindanitra akory ny vahindanitra. Fikarohana lehibe izany ary nitarika ny fijerin'ny vahindanitra hafa tao amin'ny manodidina anay.
Ny Milky Way dia iray amin'ireo galaxies dimampolo izay antsoina hoe "Ny Vondrona Local". Tsy izy io no tena goavana indrindra ao amin'ny tarika. Misy ireo lehibe kokoa miaraka amin'ireo vahindanitra miavaka toy ny Big Magellanic Cloud sy ny sakaizany ny Cloud Magellanic Cloud , miaraka amin'ireo sombintsombiny amin'ny endrika elliptika. Ireo mpikambana ao amin'ny Vondrona ao an-toerana dia mifamatotra amin'ny fiarahany mavesa-danja amin'ny fifandraisana ary mifamatotra tsara izy ireo. Ny ankamaroan'ny vahindanitra eto amin'izao tontolo izao dia miezaka manalavitra antsika, tarihin'ny hetsiky ny angovo maizina , fa ny "Milky Way" sy ny sisa "Fianakaviana" eo an-toerana dia akaiky akaiky ary mifamatotra amin'ny alalan'ny herin'ny hery.
Fikambanana ao an-toerana
Ny vahindanitra tsirairay ao amin'ny Vondrona Local dia manana ny haben'ny endriny, ny endrika, ary ny famaritana ny toetra. Ny vahindanitra ao amin'ny vondrona eo an-toerana dia manangana faritra iray manodidina ny 10 tapitrisa hazavana manerana ny tany. Ary, ny vondrona dia anisan'ny vondron'ireo vahindanitra maromaro fantatra amin'ny hoe Supercluster Local. Misy vondrona vahindanitra maromaro hafa, anisan'izany ny Virgo Cluster, izay eo amin'ny 65 tapitrisa hazavana an-jatony.
Ireo mpilalao lehibe ao amin'ny vondrona eo an-toerana
Misy vahindanitra roa izay manapaka ny vondrona ao an-toerana: ny vahindanitra misy antsika, ny Milky Way , ary ny vahindanitra Andromeda. Misy laona eo amin'ny roa sy sasany tapitrisa tapitrisa eo ho eo. Samy galaxies ho an'ny sponjy izy ireo ary saika ny vahindanitra hafa ao amin'ny vondrona misy azy dia mifamatotra amin'ny iray na ny iray hafa, miaraka amin'ny fisarahana vitsivitsy.
Ny vahindanitra izay mifamatotra amin'ny vahindanitra Milky Way dia misy vahindanitra vahindanitra maromaro, izay tanàna kely misy stellar izay misy endrika ety ivelany. Anisan'izy ireo ny:
Tafio madinika sy madinika kely
Ursa Major II Zazakely
Ny vahindanitra izay mifamatotra amin'ny vahindanitra Andromeda dia:
Galaxy Triangulum (galaxy lehibe fahatelo eo amin'ny vondrona misy azy)
Pisces Dwarf (tsy fantatra raha satelita amin'ny Andromeda Galaxy na Galaxy Triangulum)
Galaxies hafa ao amin'ny vondrona eo an-toerana
Misy vondrona "oddball" sasany ao amin'ny vondrona eo an-toerana izay mety tsy "mifatotra" amin'ny Andromeda na ny Vahindanitra Milky Way. Amin'ny ankapobeny, ny astronoma dia manangona azy ireo ao anatin'ny faritra, na dia tsy mpikambana "ofisialy" ao amin'ny Vondrona ao an-toerana aza izy ireo.
Ny vahindanitra NGC 3109, Sextans A ary ny Antlia Dwarf dia toa samy manana fifandraisana amin'ny herim-batana avokoa fa tsy mifandray amin'ny vahindanitra hafa.
Misy vahindanitra hafa izay tsy mifanentana amin'ny vondrona misy vahindanitra etsy ambony, anisan'izany ireo sombin-doko sy tsy ara-dalàna manodidina. Ny vitsy dia voakolokoloin'ny Milky Way amin'ny fivontosana mitohy izay mitrandraka ny vahindanitra rehetra.
Ireo galaxia mifanakaiky akaiky ny tsirairay dia mety hifanerasera amin'ny fiovaovana goavana raha toa ka marina ny fepetra.
Ny fifandraisany amin'ny gravité dia mifamatotra amin'ny fifandraisana akaiky na ny fifangaroan-tena marina. Ny vahindanitra sasany voalaza etsy ambany dia mbola hanohy hiova tsindraindray satria mifangaro amin'ny dihy lehibe izy ireo. Rehefa mifampiresaka izy ireo dia afaka mifampahery. Izany fihetsika izany - ny dihy misy ny vahindanitra - mampitombo ny endriny. Amin'ny toe-javatra sasany, ny fifandonana dia miafara amin'ny vahindanitra iray mitambolimbolina hafa. Raha ny marina, ny Milky Way dia eo am-pandevonan'ny vahindanitra misy vahindanitra.
Ny Milky Way sy ny vahindanitra Andromeda dia hanohy "hihinana" vahindanitra hafa. Misy porofo sasany mety hitarika ny rahona Magellanic amin'ny Milky Way. Ary, any amin'ny ho avy Andromeda sy ny Milky Way dia hifamotoana hamorona galaxia lehibe iray izay nolazain'ny astronoma hoe "Milkdromeda". Ity fifandonana ity dia hanomboka ao anatin'ny taona vitsy monja ary hanova tanteraka ny endriky ny vahindanitra roa rehefa manomboka ny dihy lehibe. Ny vahindanitra vaovao izay hamorona azy amin'ny farany dia nomena anarana hoe "Milkdromeda".
Natontan'i Carolyn Collins Petersen .
Ny Cloud Magellanic Cloud
Sirio: Ilay kintan'ny Dog
Galaxies de l'elliptique: Tanànan'ny tanàn-dehibe
Ny Star Nuitron dia mifamahofaho ao amin'ny Flash Millisecond Bright
Ny Planet Mercury ho tetikasa ara-tsosialy momba ny siansa
Tatitra mahatalanjon'ny Astronomia
Miaina ao An-tanàna ve Ianao? Afaka maka Stargaze ianao
Firy no kintana?
Mark O'Meara: Mpitarika iray tsy tapaka no voatanisa tamin'ny taona goavana iray
Patty Duke Maty tamin'ny 69
Ny taona 1600s & 1700s Militera momba ny tantaran'ny miaramila
Famaritana ny Java Term: Parameter
Ny karaman'ny Tiger Woods: Ny Golfa Billion Dolarim-bola
Ny anaran'ny PALMER sy ny tantaram-pianakaviana
21 Teny nalaina momba ny Anti-feminisme
Evaporite Minerals sy Halides
Fomba fitenin'ny modely amin'ny mpianatra anglisy
Mistery i Agatha Christie
Tsy Nanjavona Anjanahary izy ireo: Ny Tantaran'i Mercury 13
No Dinihina Tsara Fanahy?
Ahoana no hamaritana ny datin'ny Ash Wednesday?
Boky voalohany nosoloina sy tsy nahazoan-dalana momba Bill Gates
Ahoana no fiasan'ny osmosis?
Manorata any amin'ny Premier of Ontario
Confidante sy fahatokiana
Inona no mahatonga ny piramakan'ny ranomasina?
Fanamafisam-peo - fe-potoana ho an'ny fandefasana fampianarana
Miverina any an-tsekoly taorian'ny rivo-doza Katrina
Alohan'ny hanavaozanao ny tranonao
Fanadinadinana - Dave Pirner of Soul Asylum
Veto Item Veto: Fa nahoana no tsy afaka manao izany ny filoham-pirenena?
Ny Crusades: Battle of Hattin